Homeယုကီသင်ဟာ “ခေါင်းဆောင်ကောင်း” တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီလား?
ဒီစကားကို နေရာတိုင်းလိုလိုမှာ ကြားဖူးတတ်ကြသလို ခေါင်းဆောင်ကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ၊ ခေါင်းဆောင်ကောင်း ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ် အောက်မှာပဲ များစွာသော အယူအဆများစွာနဲ့ လူတိုင်း သိနှင့်ပြီးသားလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းဟာ တွဲခေါင်း၊ ခေါင်းဆောင်ဆိုတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တချို့က ကိုယ်တတ်ကျွမ်းမှု နယ်ပယ်အရ၊ တချို့က ဝါအရ၊ တစ်ချို့က အသက်အရွယ်အရ အစရှိသဖြင့် ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ နေရာမှာပဲ အမျိုးမျိုး ကွဲပြားမှုတွေနဲ့ နေရာတိုင်းမှ ာရှိနေတတ်ပါတယ်။ “ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ နောက်လိုက်ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့လဲ လိုတယ်” ဆိုတဲ့စကားလုံးလဲ အားလုံးနဲ့ မဆန်းတော့ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် နောက်လိုက်ကောင်းဖြစ်တိုင်းလည်း ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်ဟာ ခေါင်းဆောင်နေရာ ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ကိုယ့်အပေါ် မှီခို ပေးနေတဲ့ နောက်လိုက်တွေအတွက် တချိန် ကိုယ်နောက်လိုက်တုန်းကနေရာမှာ ဘယ်လိုတွေ ကျင်လည်ခဲ့ရသလဲဆိုတာ ဘဝမမေ့တတ်ဖို့လဲ လိုအပ်ပါတယ်။
ခေါင်းဆောင်ကောင်း ဆိုတဲ့ စကားလုံးမှာလဲ အထင်မှားတတ်ကြတာ တစ်ခုက ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ နေရာတိုင်းမှာ အကုန်သိ အကုန်တတ်ရမယ် ဆိုတဲ့ ခံယူချက်တွေဟာ လွဲမှားနေပါတယ်။ “ခေါင်းဆောင်”ဆိုတာကလဲ နောက်လိုက်တွေ ကိုယ့် Support ပေးမယ့်သူတွေ ရှိလာမှလဲ ဖြစ်လာတဲ့နေရာတစ်ခုပါ။ ဒီတော့ ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်က မဖြစ်မနေ တတ်သင့် သိသင့်တာကတော့ “Management” ပိုင်းပါပဲ.. ကိုယ့် အသင်းအဖွဲ့မှာရှိ နေတဲ့ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့အရည်အချင်းအလိုက်ပေါ် မူတည်ပြီး နေရာချတတ်၊ အသုံးချတတ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။
တတ်ကျွမ်းသူတွေကို ရှာဖွေရွေးထုတ်နိုင်စွမ်း ရှိရမှာဖြစ်သလို မတတ်ကျွမ်းသေးသူတွေကို တတ်ကျွမ်းလာအောင် လေ့ကျင့်ပေးနိုင်စွမ်းရှိဖို့လဲ လိုအပ်ပါတယ်။ သုံးမရတဲ့ နောက်လိုက်ငယ်သားဆို တာမရှိပါဘူး အသုံးမချတတ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ပဲရှိပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ Team တစ်ခုရှိတာနှင့်အမျှ နောက်လိုက်ငယ်သားတွေကို လှော်တက်တစ်ခုစီပေးထားပြီး သူတို့ကျွမ်းကျင်ရာနေရာတွေမှာ လှော်နိုင်အောင် လိုရာခရီးကို အတူဆွဲခေါ်ပြီး ညွှန်ပြတတ်ရမှာ ခေါင်းဆောင်ကောင်း လုပ်ရပ်တစ်ခုပါ။
ကိုယ့်အသင်းအဖွဲ့ထဲမှာ ကိုယ့်လောက်နီးပါး လုပ်နိုင်သူ၊ စွမ်းဆောင်နိုင်သူပါနေရင်လည်း အဲ့သူရဲ့ လှော်တက်တွေ မသိမ်းဆည်းထားဘဲ သူတို့ကို အားပေး အသိမှတ်ပြုပြီး ခရီးအမြန်ပေါက်အာင် လှော်ခိုင်းလေ ပို၍ ခရီးနီးလာလေပါပဲ။ တချိူ့တော်တော်များများ ကြုံဖူးကြမှာပါ ကိုယ့်လက်အောက်ငယ်သားက ကိုယ့်လောက်တန်းတူ လုပ်နိုင်ကြပြီဆိုရင် နေရာပေးဖို့ ချီးမြှောက်ဖို့ အင်မတန်ကို ဝန်လေးတက်ကြပါတယ်။ နောက်တစ်မျိုးကတော့ တစ်လှေထဲ အတူတူ လှော်နေရက်နဲ့ လှေဝမ်းပေါက်လာတဲ့အခါ အပြစ်တင် လက်ညှိုးထိုးတတ်ကြသူတွေပါ။ ကိုယ့်လှေထဲမှာ ‌ကိုယ့်နေရာ မဟုတ်ဘဲ လှေဝမ်းပေါက်နေလဲ ငါခေါင်းဆောင် အောက်ထိ ဆင်းဖာစရာ မလိုဘူးဟု တွေးမှတ်တတ်ကြတဲ့သူတွေပါ။ ကိုယ့်လက်အောက်ငယ်သားကို အထင်သေးတဲ့သူတွေ၊ ဒီလူဟာ သုံးလို့မရတော့လို့ စွန့်ပစ်တတ်တဲ့ ခေါင်းဆောင် အမည်ခံလူတွေလဲ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ သုံးမရတဲ့သူကို သုံးလို့ရတဲ့အထိ လေ့ကျင့်ပေးဖို့က ခေါင်းဆောင်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ သုံးမရတဲ့သူတွေရှိတာ ခေါင်းဆောင်ညံ့လို့ပါ။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေက အနာဂါတ်မှာ ပေါ်ပေါက်လာမယ့် ခေါင်းဆောင်လောင်းများ မွေးထုတ်ပေးနိုင်တတ်ရသလို လမ်းပြပေးတတ်ရပါတယ်။ ကိုယ့် လက်အောက်ငယ်သားဟာ ကိုယ်နဲ့ အမြင် မတူတဲ့အခါမှာလဲ အမြင်မတူလို့ လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာ ခေါင်းဆောင်နေရာမှာ လုပ်နေတဲ့ သူများ မရှိသင့်တဲ စိတ်ထားတစ်ရပ်ပါ။
လက်အောက်က လူတွေရဲ့အမြင်ဟာ ကိုယ်နဲ့ ရှုထောင့်မတူတာပဲ ဖြစ်မယ်လို့ ခံယူရပါမယ်။လက်အောက်ကသူတွေရဲ့ အတွေးအမြင်တွေကို ထုတ်ဖော်ခွင့်ပေးရပါမယ်၊ အသိမှတ်ပြုပေးတတ်ရပါမယ်။ တချို့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာလဲ တွေ့ရတတ်ပါတယ် နောက်လိုက်တွေက ဆိုးသွမ်းတယ် ပြောမရဘူးဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေပါ၊ အရင်က ကောင်းနေရက်နဲ့ ဒီနောက်လိုက်ဟာ “ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက် ရှာတတ်ဖို့လဲ လိုပါတယ်။ အဖြေတွေ့ရင် ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ကိုယ့်လက်အောက်က လူကို Counselling လုပ်တတ်ရပါမယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုယ်ချင်းစာတရား၊ ကိုယ့်နောက်လိုက်အပေါ် ယုံကြည်မှုတွေ နဲ့အတူ သူတို့ရဲ့ ယုံကြည်မှုတွေ ရထားဖို့လဲ လိုအပ်ပါတယ်။
ယုံကြည်မှုရဖို့ဆိုရင်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့ ထိပ်တန်းအကျဆုံး အရည်အချင်းက အားလုံးအပေါ်မှာရိုးသားဖို့၊ မေတ္တာထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အကောင်းမြင်စိတ်ထားနဲ့တွေးပေးမှ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ လူတွေအပေါ်သြဇာညောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အပြန်အလှန်လေးစားယုံကြည်မှုရှိဖို့လိုပါတယ်။ အခြားသူတွေဆီက လေးစားမှု လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကိုလေးစားမှုပြရပါမယ်။ ဂရုစိုက်မှု ပြရပါမယ်။ ကိုယ်ဟာ နေရာတစ်ခုမှာ ခေါင်းဆောင်နေရာ ရနေပြီဆိုရင်တော့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းမှာ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ အရည်ချင်းတွေ စိတ်ဓါတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ ပြည့်မှီနေမှ “ခေါင်းဆောင်ကောင်း” ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ရနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဟာ နေရာတစ်ခုရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုပိုင်း ရလာပြီဆိုရင်တော့ “ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခေါင်းဆေင်ကောင်း တစ်ယောက်အဖြစ် ခံယူနိုင်ပြီလား” ဆိုတာ စဉ်းစားရပါလိမ့်မယ်။
စာရေးသူ – ယုကီ
Learning ခေါင်းဆောင်ကောင်း ဆောင်းပါးများ နောက်လိုက်ကောင်း ယုကီ
Sammi December 15, 2021 at 8:33 PM
​ခေါင်း​ဆောင်ဆိုတဲ့ ​နေရာလဲ မ​နေရ​သေးလား ကွကို ​
ခေါင်း​ဆောင်နိုင်လား ဆိုတာ မသိ​သေးပါဘူး
ဒါမဲ့ ​ခေါင်း​​ဆောင်မဟုတ်တဲ့ ​ခေါင်းရှောင်တွေနဲ့
San Zuren December 16, 2021 at 12:26 AM
ငါတို့ အားလုံးဟာ ခေါင်းဆောင်တွေပါ
Dar Dar December 16, 2021 at 7:12 AM
akkh December 19, 2021 at 6:13 PM
ချိုသာတဲ့ ညိုပြာ December 28, 2021 at 6:38 AM
ခေါင်းဆောင်နေရာကို လုတဲ့ အာဏာရူးနဲ့ တွေ့နေ
Se Tuang December 15, 2021 at 9:09 PM
Lat December 16, 2021 at 1:51 AM
Dar Dar December 17, 2021 at 5:25 AM
Chu Zim December 15, 2021 at 9:15 PM
Admin ကတော့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ပါ ☺️
Sammi December 15, 2021 at 10:06 PM
👍👍👍 Skill ​တွေလဲ များကြီး ရှိသူပါ
Lynn Wai Xann January 18, 2022 at 2:58 AM
Su December 15, 2021 at 10:29 PM
Lat December 16, 2021 at 1:50 AM
PHOE kyaw December 15, 2021 at 11:02 PM
Ei Nandar Aung December 15, 2021 at 11:26 PM
Myint Win December 18, 2021 at 9:07 AM
Kyaw Gyi December 16, 2021 at 12:25 AM
Wai Zin Mar December 16, 2021 at 12:47 AM
Myint Win December 17, 2021 at 11:50 PM
Wai Zin Mar December 18, 2021 at 3:01 AM
Myate December 16, 2021 at 1:12 AM
Zin Mar Htwe December 16, 2021 at 1:47 AM
Moe Htet Waay Waay December 16, 2021 at 3:18 AM
Aung December 16, 2021 at 3:41 AM
wunna December 16, 2021 at 4:11 AM
Ei December 16, 2021 at 6:26 AM
Fedeforce December 16, 2021 at 6:26 AM
Dar Dar December 16, 2021 at 6:33 AM
Aye Zaw Thu December 16, 2021 at 6:56 AM
Dar Dar December 16, 2021 at 7:03 AM
Mon mon December 16, 2021 at 8:10 AM
Neon December 16, 2021 at 8:12 AM
Saw San Myint December 16, 2021 at 5:56 PM
NSL December 16, 2021 at 6:57 PM
KNC December 16, 2021 at 7:59 PM
Sapalphyu December 16, 2021 at 9:22 PM
Su Su December 16, 2021 at 9:46 PM
Mgmgzaw December 16, 2021 at 9:53 PM
Su Su December 16, 2021 at 10:12 PM
Unknown December 16, 2021 at 10:33 PM
yoke soe December 17, 2021 at 12:19 AM
Ko Ko December 17, 2021 at 12:34 AM
Where my baby?
Elrics December 17, 2021 at 2:06 AM
Minn Thant December 17, 2021 at 3:04 AM
Ko Tun December 17, 2021 at 3:20 AM
Myate December 17, 2021 at 3:56 AM
AKM December 17, 2021 at 1:43 PM
AKM December 17, 2021 at 2:01 PM
AKM December 17, 2021 at 2:35 PM
Myat December 17, 2021 at 3:31 PM
Unknown December 17, 2021 at 5:48 PM
Kan December 17, 2021 at 7:56 PM
Nyo lay December 17, 2021 at 8:02 PM
TZ December 17, 2021 at 8:09 PM
TT December 17, 2021 at 8:10 PM
Aye Zaw Thu December 17, 2021 at 8:17 PM
Myint Win December 17, 2021 at 9:06 PM
Zin Mar Htwe December 17, 2021 at 9:14 PM
Success December 17, 2021 at 9:46 PM
U Nyi December 17, 2021 at 11:14 PM
myochitmyanmar December 18, 2021 at 12:29 AM
Sai yarzar December 18, 2021 at 1:48 AM
Bo Bo Thein December 18, 2021 at 2:56 AM
Princess December 18, 2021 at 3:22 AM
Me December 18, 2021 at 3:47 AM
Ko Khant December 18, 2021 at 4:30 AM
Su Su December 18, 2021 at 4:37 AM
Su Su December 18, 2021 at 5:04 AM
Sam December 18, 2021 at 5:13 AM
Dar Dar December 18, 2021 at 5:43 AM
Unknown December 18, 2021 at 6:09 AM
KhantGyi December 18, 2021 at 6:56 AM
AM4Pnu December 18, 2021 at 7:03 AM
နိုင်မှ ဖြစ်မှာ ရဲဘော်တို့ရေ သွေးမအေးကြပါနဲ့
Ahkhayar Oo December 18, 2021 at 9:03 AM
phoophoo December 18, 2021 at 7:34 PM
KhantGyi December 18, 2021 at 9:24 PM
Of couse not😁
Yin Yin Naing December 18, 2021 at 10:11 PM
Lisa klein December 18, 2021 at 10:43 PM
The article is very insightful.
Thuta December 18, 2021 at 11:21 PM
mon December 18, 2021 at 11:38 PM
Zin Zin December 19, 2021 at 12:28 AM
TT December 19, 2021 at 1:30 AM
chaw December 19, 2021 at 1:41 AM
AKM December 19, 2021 at 3:23 AM
AKM December 19, 2021 at 3:26 AM
AKM December 19, 2021 at 3:27 AM
Dar Dar December 19, 2021 at 3:29 AM
Hla Hla Nue December 19, 2021 at 4:05 AM
M December 19, 2021 at 5:21 AM
N Y p December 19, 2021 at 6:17 AM
M December 19, 2021 at 6:18 AM
If you believe the truth is always win,make it really happen🙂
Thae Htate Htar Su December 19, 2021 at 6:36 AM
Khaing Swe Mar December 19, 2021 at 6:57 AM
ဆု December 19, 2021 at 7:55 AM
Thar Htwe December 19, 2021 at 8:51 AM
Kaung Satt Zaw December 19, 2021 at 9:01 AM
Aye Kay December 19, 2021 at 3:27 PM
Give us thoughs and ideas.
NwayOo December 19, 2021 at 3:48 PM
Bunny December 19, 2021 at 5:42 PM
Aye Myat December 19, 2021 at 5:50 PM
Kan December 19, 2021 at 9:12 PM
Admin isagood leader.
Ni Ni Phoenix December 19, 2021 at 9:39 PM
yes December 19, 2021 at 10:15 PM
Dar Dar December 19, 2021 at 11:11 PM
Dar Dar December 19, 2021 at 11:25 PM
Electric Block December 19, 2021 at 11:36 PM
Khine Moe December 20, 2021 at 7:54 AM
AKM December 20, 2021 at 8:59 AM
M December 20, 2021 at 3:10 PM
အမာခံ clickerများ fighting
aungkhaing December 20, 2021 at 3:58 PM
chaw December 20, 2021 at 4:03 PM
TT December 20, 2021 at 6:57 PM
Bunny December 20, 2021 at 6:59 PM
Thar Htwe December 20, 2021 at 7:33 PM
나수민 December 20, 2021 at 9:10 PM
Shoon December 20, 2021 at 9:59 PM
Zz December 20, 2021 at 11:22 PM
Dar Dar December 20, 2021 at 11:36 PM
Wai Zin Mar December 21, 2021 at 12:34 AM
Kyaw Thiha December 21, 2021 at 12:56 AM
Minge December 21, 2021 at 2:06 AM
T K K December 21, 2021 at 3:13 AM
Double U December 21, 2021 at 6:12 AM
Tin Aung December 21, 2021 at 6:22 AM
Swe Zin Mar December 21, 2021 at 7:16 AM
N Y p December 21, 2021 at 7:32 PM
Unknown December 23, 2021 at 9:02 PM
Leadeeship is important, thanks for the topic
Unknown December 25, 2021 at 9:10 AM
Leadership is important, when build up an organization
Hla Hla Nue December 29, 2021 at 7:14 AM
ချိုသာတဲ့ ညိုပြာ December 31, 2021 at 3:51 AM
Hla Hla Nue January 3, 2022 at 8:39 PM
Hla Hla Nue January 5, 2022 at 6:29 AM
Hla Hla Nue January 8, 2022 at 6:29 AM
td January 11, 2022 at 12:25 AM
Hla Hla Nue January 12, 2022 at 1:38 AM
Hla Hla Nue January 12, 2022 at 9:03 PM
🤜🤛 🤜🤛 🤜🤛 💪
Back kham January 15, 2022 at 7:53 AM
Unknown January 15, 2022 at 8:20 AM
ကိုလူပျို January 18, 2022 at 9:59 PM
'ပုဂံ' ဘယ်ရွေ့ ')
Aung Naing January 19, 2022 at 5:11 AM
Aye Kyaing January 19, 2022 at 5:16 AM
Unknown January 19, 2022 at 8:32 AM
l love all clicker.
Moe Moe Lwin January 19, 2022 at 6:27 PM
I worked as good follower but I did not gotagood leader except boss.
Unknown January 19, 2022 at 9:07 PM
Unknown January 20, 2022 at 9:16 AM
Hla Hla Nue January 21, 2022 at 7:20 AM
Kyaw mae yaung January 22, 2022 at 6:41 AM
I am faကျော်မဲရောင်is my fb acc.17old😁😁😁😁
Myate January 22, 2022 at 4:31 PM
Hla Hla Nue January 23, 2022 at 7:07 AM
Pan Thit Kha January 24, 2022 at 1:13 AM
ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္မယ္ January 24, 2022 at 1:15 AM
Eaindray Tae January 24, 2022 at 1:20 AM
Unknown January 24, 2022 at 1:24 AM
Thin Zar Aung January 24, 2022 at 1:27 AM
Unknown January 24, 2022 at 1:40 AM
Unknown January 24, 2022 at 1:54 AM
အသက်ရင်းသူတွေကို.. ကူညီဖို့..c2dမှာ.. clickစို့နော်..
ko phyo January 24, 2022 at 1:59 AM
ကလစ်အပေါင်းနဲ့ ထု ထောင်း ချကြပါစို့...
Unknown January 24, 2022 at 1:59 AM
Omy K January 24, 2022 at 2:02 AM
ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ စိတ်ဓါတ်ကောင်း, သန္ဓေကောင်းလိုတယ်၊ စိတ်ဓါတ်ကောင်းရင်လည်း ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အဖြစ် ရွေးချယ်ခြင်း ခံရတာပါပဲ။
လက်နက်ပြ, အင်အားပြပြီး "ငါ ခေါင်းဆောင်ကွ"လို့ နေရာ ယူစရာကို မလိုဘူးးးး
ဒါဟာ ခေါင်းဆောင်ကောင်းလည်း မဟုတ်ဘူး
Unknown January 24, 2022 at 2:12 AM
ကိုမောင် January 24, 2022 at 2:14 AM
Unknown January 24, 2022 at 3:08 AM
KG January 24, 2022 at 2:14 AM
မအလ MaALoe ကိုအမျှစ်ဖြုပ်ဖို့များများကလစ်ကြပါစို့
Unknown January 24, 2022 at 2:26 AM
Sailu January 24, 2022 at 2:27 AM
Let's click ..to get rid of the evils of Myanmar.
Phyuthan January 24, 2022 at 2:30 AM
Phue January 24, 2022 at 2:31 AM
We must win 💜✨
Unknown January 24, 2022 at 2:41 AM
U Waimin776791256 January 24, 2022 at 2:45 AM
Unknown January 24, 2022 at 3:06 AM
အ​ရေး​တော်ပုံ မုချ ​အောင်ရမည်။🚩🚩🚩
pu tue January 24, 2022 at 3:09 AM
kono dio da January 24, 2022 at 3:17 AM
SD January 24, 2022 at 3:24 AM
Lwin Lwin January 24, 2022 at 3:24 AM
Myate January 24, 2022 at 3:40 AM
myokhaing January 24, 2022 at 3:42 AM
Ye January 24, 2022 at 3:54 AM
Ye January 24, 2022 at 3:59 AM
မြင်နေတွေ့နေရတာတွေကြောင့် စိတ်ထဲမွန်းကျပ်မှုတွေက ခုလို click လိုက်ရမှ ကြော်ညာတွေ ကြည့်လိုက်ရမှ နည်းနည်းပြေလျော့သွားတယ် တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူတွေ CDM သမားတွေ အားလုံး ကို ကျေးဇူးတင်တယ် နောက်ပီး အားလဲ နာတယ် admin ကို လဲကျေးဇူးပါ ဒီနေရာလေးက ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ စကားဝိုင်းလေး တစ်ခုလို့မြင်မိတယ် အပြင်မှာပြောလို့ အော်လို့ အဆင်မပြေတဲ့ စကားတွေကို ဒီမှာအော်လို့ ပြောလို့ရတယ် ဗျာ
နေမင်း January 24, 2022 at 4:02 AM
Unknown January 24, 2022 at 4:05 AM
tharlay January 24, 2022 at 4:05 AM
TAVOYAN January 24, 2022 at 4:10 AM
Let's C2D C2W
Victory is Ours! January 24, 2022 at 4:33 AM
ဝင်းသန်း January 24, 2022 at 4:38 AM